Malaayiin doollar oo ku kacaysa darbiga ay Keyna ka dhiseyso xadka Soomaaliya oo laysku heysto - Halbeeg News
Malaayiin doollar oo ku kacaysa darbiga ay Keyna ka dhiseyso xadka Soomaaliya oo laysku heysto
qeyb ka mid ah dhismaha xudduuda Soomaaliya iyo Kenya xuquuqda sawirka: Nation Media Group
NAYROOBI(HALBEEG)-kharashaka ku baxaya dhismaha darbiga muranka badan dhaliyay ee laga dhisayo xuduudda Soomaaliya iyo Kenya oo gaareysa 30.3 milyan oo doollarka maraykanka ah ayaa aad uga yaabisay baarlamaanka Kenya.
Shan sano ka hor ayay ahayd markii la bilaabay dhismaha darbigan oo ka bilaabanaya xuduudda Mandheere illaa Kiyuungu oo ka tirsan gobolka xeebta ah ee Lamu.
Guddiga difaaca iyo arrimaha dibadda baarlamaanka Kenya ayaa soo gudbiyay warbixin ku saabsan mashruucan waxa ayna xukuumadda fareen in si degdeg loo dhameystiro mashruucan.
Warbixintan lagu soo bandhigay baarlamaanka ayaa waxaa ku qoran in 3 milyan oo dollar lagu qarash gareyn doono halkii Kilometerba.
Billowgii mashruucan ayay ansixiyeen Guddiga Talo-bixinta Amniga Qaranka Kenya (NSAC) swaxaana fulinaysay Wasaaradda Arrimaha Gudaha ka hor intii aan loo wareejinin Wasaaradda Difaaca.
Baarlamaanka Kenya ayaa ka biyo diiday mashruucan lagu dhisayo darbiga waxayna sheegeen in dhismaha darbigan uusan meesha ka saari karin caqabadaha amni ee dalka Kenya kaga imaanaya al-Shabaab.
Xubnaha baarlamaanka Kenya ayaa ugu baaqay Agaasinka Baaritaanka Dambiyada (DCI) iyo guddiga Anshaxa iyo La-dagaallanka Musuqmaasuqa (EACC) inuu baaro sida loo maamulay kharashka lagu dhisayo darbiga.
Hoggaamiyaha Aqlabiyadda Baarlamaanka Kenya, Aadan Barre Ducaale ayaa dalbaday in Agaasinka Baarista Dambiyada (DCI) ay baaritaan buuxa iyo dabagal ku sameeyaan kuwa amni darrada ka shaqeeya ee doonaya in ay mashruuca dhismaha darbigan lacagta ku lunsadaan.
Ismaaciil Cumar Geelle oo Muqdisho ku soo wajahan